programming - phpmyanmar.com
Using the function 'echo'။ ပရိုဂရမ် တခုကို run လုပ်တဲ့ အခါ ဘယ်လောက် ပဲ ရှုပ်ထွေး တဲ့ ပရိုဂရမ် ဖြစ်နေ ပါစေ၊ နောက်ဆုံး မှာ ရလာဘ် အဖြေ တခု ကို return ပြန် ပို့ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအခါ မှာ programmer ဟာ အောက်ဖေါ်ပြ ပါ လုပ်ဆောင် ချက် တခုခု ကို အများ အားဖြင့် ဆောင်ရွက် မှာဖြစ် ပါတယ်။ ပြန်ရတဲ့ return ကို file အခု အနေနဲ့… more....
PHP strings များတွင် 'single quote' နှင့်� 'double quote' တို့အား အသုံး ပြုပုံ။ စာလုံး အက္ခရာ အတွဲလိုက် အစုအဝေး များ ကို PHP တွင် string ဟု ခေါ်ပါ သည်။Strings များတွငိ အောက်ပါ တို့ ပါဝင် ပါသည်။ စာလုံး အက္ခရာ များASCII သင်္ကေတ များနံပါတ် များvariables များစာလုံး အက္ခရာ အတွဲ (strings) များ ကို variable တွင် assign လုပ် သည့် အခါ (သို့မဟုတ်) စာလုံး အက္ခရာ… more....
သင့် server ပေါ်ရှိ Php ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ကြည့် ခြင်း Php code တကြောင်းထဲ ရေး ရုံနဲ့သင့် server ပေါ် မှာ run လုပ်နေတဲ့ Php ရဲ့ information စာမျက်နှာ ၄-၅ ရ့က် လောက် ခေါ်ကြည့် လို့ ရပါ တယ်။ အောက်ပါ code ကို notepad မှာရေး ပြီး phpinfo.php ဆိုတဲ့ file name နဲ့ server ရဲ့ www folder မှာ save လုပ်ပါ။ PhpInfo phpinfo()… more....
Here I will tell you how to write your very first PHP program
သင်၏်ပဋ္ဌမဆုံး Php Program။ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ပထမဆုံး Php program ကို မရေးမှီ Php tags တွေ အကြာင်း နည်းနည်း ရှင်းပြ လို ပါတယ်။ Php code တွေ ကို html code တွေနဲ့ ရော နှော်း ရေး လို့ ရပါ တယ်။ Html code ဆုံး ပြီး php code စတော့ မယ် ဆို ရင် "php start tag" ကို ရိုက်ရ ပါတယ်။ နောက် php… more....
Introduction and brief description of PHP
Php အကြောင်း။ Php သည် web server ပေါ် ၌ run လုပ်သော server side scripting language တစ်ခုဖြစ် သည်။ ၎င်း ကို အသုံးပြု ပြီး interactive website များ ဖန်တည်း နှိုင် ပါ သည်။ Php သည် အလွန် အသုံး များ ပြီး အခမဲ့ သုံး နိုင် သော programming language တစ်ခု ဖြစ်သည့် အပြင် html နှင့် ရော ၍ ရေးသာ နိုင် ပါ… more....
မြန်မာ များ အတွက် PHP။ မြန်မာ IT သမာ များ Php ဘာသာရပ် ကို မြန်မာ နှင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာတို့ ဖြင့် လေ့လာ နိုင်စေ ရန်ရည်ရည်ရွယ်ပြီး ဤ website ကို တည်ထောင် ထား ပါသည်။ Php သည် (PHP:Hypertext Preprocessor) ၏ အတိုကောက်ဖြစ်၍ web server ပေါ်၌ အလုပ် လုပ် သော programming language တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အချိန် တွင် Php သည် အလွန် တ၇ာ မှ… more....
Processing time -- 0.0273 seconds.